रौतहट प्रहरी प्रमुखको इन्चार्ज बुझे एसपी घिमिरेले
काठमाडौं : एसपी विनोद घिमिरेले रौतहट प्रहरी प्रमुखको इन्चार्ज बुझेका छन्। सोमवार बेलुकाबाट एसपी घिमिरेले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट पुगेर जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्। यसअघिका जिल्ला प्रहरी प्रमुख सिद्धिविक्रम शाह पत्रकारलाई लागु औषध राखेर फसाइएको घटना प्रहरी प्रधान कार्यालय तानिएपछि जिल्ला प्रहरी प्रमुखको पद खाली थियो। एसपी घिमिरेलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले…
एसपी विनोद घिमिरेको रौतहटमा काज सरुवा
२९ भदौ, काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयलले एसपी विनोद घिमिरेलाई रौतहट प्रहरी प्रमुख बनाएर पठाएको छ । पत्रकारको मोटरसाइकलमा प्रहरीले नै लागुऔषध राखिदिएर फसाउन खोजेको घटनामा मुछिएपछि एसपी सिद्धिविक्रम शाह काठमाडौं तानिएका थिए । उनी काठमाडौं तानेपछि रौतहट प्रहरीको कमाण्ड डिएसपी नारायण चिमोरियाले सम्हाल्दै आएका थिए । अब भने प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसपी घिमिरेलाई रौतहटमा […]
भारतमा ओलम्पिकमा पदक ल्याउनेलाई पुलिसमा डेपुटी एसपी
कैलालीको प्रहरी प्रमुखमा एसपी अधिकारी
१७ असार, धनगढी । कैलालीमा प्रहरी प्रमुख परिवर्तन भएका छन् । प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) अनुपम शम्शेर जबराको सरुवा भएपछि उनको ठाउँमा एसपी विश्व अधिकारी आएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालय सुरक्षा सेवा व्यवस्थापन निर्देशनालय अंगरक्षक गण नक्सालबाट सरुवा भएका अधिकारीले बुधबार कैलाली पुगेर कमाण्ड सम्हालेका छन् । अधिकारीले सबै पक्षसँगको सहकार्यमा जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम […]
सिरहाका एसपी तानिए, हिराबहादुर पाण्डेलाई जिम्मेवारी
काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका एसपी सुदीप राजभण्डारीलाई फिर्ता बोलाइएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले मंगलबार राजभण्डारीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेका हुन् ।सिरहाको प्रमुखमा एसपी हिराबहादुर पाण्डेलाई पठाइएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । तीन महिनाअघि सिरहाको इन्चार्ज भएका राजभण्डारी आर्थिक विवादमा मुछिएका थिए ।
एसपी र डिएसपीको सरुवा, सात जिल्लका इन्चार्ज फेरिए
प्रहरी प्रधान कार्यालयले ११ एसपी तथा १८ डिएसपीको सरुवा गरेको छ । सरुवामा सात जिल्लाका प्रहरी इन्चार्ज फेरिएका छन् । सरुवा अनुसार बर्दियामा ईश्वर कार्की, गुल्मी गोपालचन्द्र भट्टराई, बाग्लुङमा कृष्णबहादुर पल्लीमगर,...
सात जना एसपीको सरुवा : चितवनमा एसपी ओम अधिकारीलाई पठाइयो
काठमाडौं : प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले सात जना प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)को सरुवा गरेको छ। एसपी ओम अधिकारीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन सरुवा गरिएको छ। चितवनका एसपी नान्तीराज गुरुङलाई भने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयमा ल्याइएको छ। त्यस्तै, एसपी रेवती ढकाललाई काठमाडौं उपत्यका सशस्त्र प्रहरी गण २ महाजगंजमा सरुवा गरिएको छ। साइबर…
गोरखाका एसपी गुरुङमाथि छानबिन सुरु
५ माघ, गोरखा । जुवातासको खालबाट बरामद रकम आफैंसँग राखेका जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी सुरेन्द्र गुरुङमाथि छानविन सुरु भएको छ । गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआईजी घनश्याम अर्यालले एसपी गुरुङमाथि छानबिन सुरु गरेको बताए । उनले भने, ‘दोषी ठहर भए कारवाही हुन्छ ।’ दसैंतिहारको समयमा इलाका प्रहरी कार्यालय ठाँटीपोखरी र जौवारीले जुवाको खालबाट बरामद […]
३० एसपी र ६९ डीएसपीको सरुवा, को कहाँ ?
काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले ३० जना प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र ६९ जना प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) को सरुवा गरेको छ । प्रहरी महानिरीक्षकको निर्णयअनुसार आगामी माघ महिनादेखि लागू हुनेगरी मंगलबार सरुवा गरिएको हो । सरुवाको सूचना अनुसार कतिपय जिल्लाका प्रहरी प्रमुख पनि बदलिएका छन् । कतिपय जिल्लामा एसपी प्रहरी प्रमुख हुने व्यवस्था छ भने केही जिल्लामा डीएसपीले नेतृत्व सम्हाल्ने गरेका छन् । हेरौं, एसपी को कहाँ ? यस्ताे छ सरुवा भएका डीएसपीकाे सूची
३० जना एसपी सरुवाः झापामा एसपी भट्टराई, मकवानपुरमा एसपी राठौर, को कहाँ?
काठमाडौं: प्रहरी प्रधान कार्यालयले ३० जना प्रहरी उपरीक्षक (एसपीको) को सरुवा गरेको छ। मंगलबार साँझ सूचना जारी गर्दै कार्यालयले उक्त जानकारी दिएको हो। झापा, पर्सा, मकवानपुर,सिन्धुली, काभ्रे, कञ्चनपुर लगायत जिल्लाका एसपी फेरिएका हुन्। झापामा एसपी सानुराम भट्टराईलाई पठाइएको छ। यसअघि झापामा एसपी कृष्ण कोइराला थिए। त्यस्तै मकवानपुरमा सोमेन्द्रसिंह राठौरको सरुवा भएको…